Cadastre ku tiirsan ujeeddo sax ah - isbeddel, is dhexgal, farsamo, ama wax aan jirin? - Geofumadas
Ogast, 2017 cadastre, Featured, egeomates My, topografia
Waxaa jirey 2009 waxaan faahfaahiyay qaabeynta nidaamka kobcinta Cadastre degmada ah, taas oo ay macquulka dabiiciga ah soo jeediyay horumarka ka mid ah sababaha primitively ansixiyeen cadastre ee ujeeddo canshuureed, iyo sida u baahan in la isku dhafaya xogta, jilayaasha iyo teknoolajiyada keenaysaa isdhexgalka xaaladeed.
Sannadkii 2014 Cadastre 2034 wuxuu sheegay in isbeddelka aragtida arrinta 'Cadastre', taas oo wadarta guud ee caymiska degmada, gobolka ama waddanka, ay ka muhiimsan tahay helitaanka saxda, iyadoo la tixgelinayo in xogta si tartiib tartiib ah loo sifeynayo. Wax la mid ah qaabkaygii sanadahaas, waxa aan ugu magacdarnay "maaraynta xaaladaha" iyadoo laga faa'iideysanayo "maaraynta geomatic".
Ujeedo ujeedo: Horumarin?
Shaxda kale waxa laga soo qaatay oo aan dabcan ugu danbeysay ee Maamulka Land ee CIAF of Colombia, oo ay muujinaysaa sida ay mustaqbalka Cadastre 2034 ayaa ka qaybgalka dadka isticmaala ee la xariirta xogta ee waqtiga dhabta ah oo ku mideysan yihiin macluumaad usii hagaajiyo ujeedada
Oo waa in Colombia tijaabiso doonaa jimicsi yar oo xaqiijin karin waxa loogu yeero Cadastre "taam u purpuse" la disillusions waxa lagu samayn Africa iyo in ay u muuqataa wax karaahiyo ah macnaha qoraalkan meesha habka, sax ah oo nidaamku wuxuu noqday mid aad uga muhiimsan qofka isticmaalkiisa.
Waxaan sidoo kale arki doonaa niyad-jabinta samaynta "cadastre aan qarsoodi lahayn" meel ay horay u ahaan jirtay shahaadada; maxay noqon doontaa mid ka badan xiiso leh.
En GIM-da Caalamiga ah ayaa la daabacay maqaal aad u xiiso badan oo ku saabsan Catastro oo "loo hagaajiyay xaaladda". By fekerayo waalan sida laga yaabaa in ay u muuqato, imtixaanka berrinka ayaa lagu sameeyey Kenya ayaa waxaa ka mid ahaa qodobada aan la wada on shuruudaha la mid ah, hay'adaha dawladda, Technology iyo Bulshada.
Iyadoo ay run tahay, in erayada qorayaasha ay, maxkamadda ugu horeeyay waxa uu ahaa a "waayo-aragnimo waxbarasho 'kaas oo waa in ay ahaadaan" baadhitaano dheeraad ah dhamaystiran si ay u muujiyaan scalability ee habkan dhigay', waxa ay u muuqataa in tallaabada ugu horeysay tan doono Wadada 'sida' ', shaqo isku mid ah ayaa loo fulin karaa si wax-ku-ool ah, oo dhan, iskuday. Tusaale in dib loo soo celin karo, isagoo caddaynaya is-waafajinta xaalad kasta oo gaar ah.
Isla markiiba maskaxda ku hayaan macnaha Latin America ee dhibaatada ballaaran. khilaafaadka Halkee waxaa bulshada wadaniga ah dagaalamaya aqoonsiga dalalka ay isirka u, bulshooyinka soo barakacay in ay weeraro dhulka magaalooyinka (loo yaqaan 'rasmi') ama lahaansho ka mid ah kiisaska kale oo, inkastoo guud ahaan dadaallada kuye, oo dhan Waxay u muuqataa in ay tilmaamayso in horumarintu ay si aad ah u socoto oo ay ku adkaysato xukunka ku qeexan marka loo eego mudnaanta magaalooyinka.
Sida saaxiibkey Peruvian ku leeyahay, Nan, 'Asal ahaan waxaan wadaagnaa sheeko isku mid ah marar badan'. Sababtoo ah ma nihin dad caqli badan, laakiin maxaa yeelay waxyaalahan oo keliya waxay adeecaan caqliga guud ee ugu fudud. Waa wax lala yaabo in mid ka mid ah qorayaasha maqaalka uu yahay Christian Lemmen, kuwaas oo loogu talagalay sannadkaas 2009 waxaan ku qoray maqaalkan «xogta ku jirta caleemaha«, Anoo tixraacaya wixii faa'iido noogu lahaa Honduras ilaa 2003 ee loogu yeero« Core Cadastre Domain Model », kana horreeyay wixii aan hadda u naqaanno« Model Land Domain Domain ». In kasta oo noocaas oo loo yaqaan 'Lemmen's CCDM' wax laga beddelay markii uu soo baxay sidii ISO 19152, fudeydku isma beddelin, maxaa yeelay wuxuu ka hadlayaa saddex tirooyinka ugu waaweyn ee tusaalaha.
Heerka LADM wuxuu bixiyaa bonanzas in aan laga yaabaa in lagu faa'idaysto taas aawadeed, si kastaba ha ahaatee, waxay u jiraan kiciyey arrimaha sida xaqiiqda ah in dhagar arkaa model ah (ma map a) waxaa loo gudbin karaa iyada oo loo marayo habab aan saxda ah iyo Waqtiga ku soo noqnoqon adigoo xakameynaya sifooyinka qeexaya tayada, saxda ah iyo ku-oolnimada.
Ujeeddo ujeedo: Isku-kalisasho?
Ka hor inta aanad u soo guurin si loogu soo koobo waayo-aragnimada Kenya, waxaan jeclaan lahaa in aan u fiirsado ereyada hore ee qorayaasha:
"Qaababka lagu baaro haboon maamulka dalka Kenya, oo diiradda saaraya bixinta horyaal oo dalka oo ay ku jiraan oo dhan in la awoodi karo, dhakhso ah oo 'ku filan' hab." Ujeeddo kooban ayaa laga yaabaa in loo qoro sida 'Bixinta mulkiilaha hantida, ku lug leh dhammaan jilayaasha habka si loo gaadho natiijo la isku halleyn karo oo la awoodi karo'. Sida ay ku gaareen waxay noqoneysaa ujeedada falanqaynta imika.
Meesha la doortay waxaa gobolka Makueni ee Kenya, imtixaanka waxaa fuliyey by Hay'adda Sahmiyayaasha Kenya, Wasaaradda Qaranka ee Dhulka, Guriyeeynta iyo Horumarinta Magaalooyinka in lala Wasaaradda Dhulalka, Macdanta iyo Physical County Planning de Makueni, isagoo tirinaya wada shaqayn dhow oo la leh alaab-qeybiyaha software-ka iyo qalabka loo isticmaalo ujeedadaas.
Sida a dhibic marka hore muhiim ah aan muujiyo dareenka of hay'adaha dowladda xagga Wafdiga oo khaas ah (Kenyan ah Sahmiyayaasha iyo qalabka farsamo ee Kadaster International) kaas oo ahaa nooca maamuuska kaliya laakiin waxaa halkii lagu gartaa ay rabaan in ay doonayaan in ay bartaan oo ku saabsan baahida loo qabo, muhiimadda iyo saamaynta mashruuca oo ka muuqatay (in erayada qorayaasha) in "wada hadal degdeg ah oo ku saabsan hab: ka qaybgalka, oo tayo leh, kharashka, waqtiga waxtarka, baahida loo qabo geesaha monumentar, sax oo ay kasoo horjeeddo caymiska , iwm "Xitaa dar Wasiirka National xiiso Dhulalka iyo daba-gal baaritaan ay sameeyeen Wasiirka Dhulalka.
Qodobka labaad ee muhiimka ah. Ka qaybqaadashada bulshada oo idil horumarinta shaqada. Qorayaashu waxay hana ka baqan in xaqiijin: ". qaybgalka ee bulshada waa aasaaska guusha" Waxay ku dar in, sida sahanka cadastral helo caawimaad ah ee deriska, xubnaha qoyska, iwm, dadka waayeelka ah ayaa ku wargeliyay ka hor iyo dadka tuulada inay "hubiyaan garashada iyo ka qaybgalka dhammaan dhinacyada"; taas oo muujinaysaa in doorka macluumaad rumoobay ujeedadu in la fahamsan yahay sida "Qof walba la socon karta geedi socodka duurka ku." Oo ka sokow, xogta la ururiyey waxaa lagu kala qaado deegaanka GIS ku salaysan daruurta ku, qof raaci kari habka , sameynta nooc ka mid ah 'ka qaybqaadasho fog'.
lagama maarmaan u noqday si aad u hesho warbixin guud ee xiriirka ka dhexeeya dadka iyo hantida dhulka labada rasmiga ah iyo, halkan oo ay ku jiraan hanti iyo soo gelitaankii dalka oo labadaba. Sidoo kale waa in laga arki ashtakooyinka iyo iska horimaadyada, la siiyey in ay ahayd mid muhiim u ah maamulka si aad u hesho warbixin guud ee unugyada ee meel ama xuduudaha lagu muransan yahay. Khariidadan "khilaafka" ayaa ah meesha ugu horreysa ee lagu taageerayo hababka xalinta khilaafaadka. Mar walba maskaxda ku hayso jiilka qaabka habka loo marayo heer qaran oo lagu taageeri karo bulshada dusha sare.
Marka laga hadlayo khilaafaadka dhuleed, kuwa ku lugta leh waxay u baahan yihiin inay isku raacaan 'labada dhinacba' ee khilaafka iyo goobahooda. Sida inta lagu jiro habka loo qoondeeyay berrinka, boodhadhka waxaa loo abuuray garaannada loo yaqaan 'cylinders', iyaga oo 'la duubay' sidaa darteed maamulada udhexeeya ayaa ogaan kara goobta saxda ah iyo nooca khilaafaadka hadda jira.
Kormeerka dadwaynaha iyo sidoo kale nidaamyo kale oo caadi ah (oo inta badan fuliya golaha degaanka) ayaa badanaa lagu qabtaa kulannada magaalada iyada oo lala kaashanayo dhinacyada saddexaad ee lagu kalsoon yahay. Halkaa, xubnaha bulshada ayaa kulmaya si ay u arkaan dhammaan xogta lagu soo ururiyey khariidada, ka wada hadla oo heshiiya natiijooyinka. Intii lagu gudajiray baaritaanka goobta, xogta la soo bandhigay waxaa lagu xaqiijiyay dhawaaqa bulshada.
Ujeeddo ujeedo: Farsamo?
Teknoolajiyada loo isticmaalo
Deegaanka qaabeynta wuxuu ku salaysan yahay codsi ESRI ah oo loogu talagalay maareynta xog ururinta. Tani waxaa la isticmaalay iyadoo la isticmaalayo qalab qaboojin ah oo qalabka "GPS Trimble", kaas oo isticmaala isku xirka Bluetooth. Kuwani waxay aad ugu fiicnaayeen dhulalka buuraha madaama miisaankoodu hooseeyo. qalabka GPS Xararad u baahan signal la saxo, waayo, dhabtii Hawada ee calaamadaha GPS iyo saxsanaanta submeter u noqday ku filan, si-ay dhacdo in this ma ahayd lagama maarmaan qalabka-sax sare.
Beddelaadda habka ujeeddadu waxay kugula talineysaa isticmaalka "xaddidaadaha muuqaalka" si loo ogaado qeexitaanka xuquuqda dhulka. Sida meelaha miyiga ah ee Kenya waxaa jira xuduudo dabiici ah oo muuqda, dadweynaha xayawaanku waxay sameeyeen xuduudo kale oo muuqda iyaga oo isticmaalaya dhirta khudradda. Sidan oo kale, xuduudaha oo dhan way fududdahay in lagu aqoonsado berrinka iyo sawirada dayax-gacmeedka. Ka dib markii lagu ogaado goobta, xuduudaha muuqaalka ah waxaa lagu sawiray qalin qori ama "sawir dijitaal ah" adoo isticmaalaya qalabyada GPS-ga ee sawirada.
Ka dib markii la ururiyey xogta goobta, waxay ahayd in lagu hubiyo sharaf iyo diyaarinta kormeerka dadweynaha ee dambe. Daabacaad ayaa loo baahnaa si loo soo bandhigo xogta xaddidan, inta badana la tixraacayo xisaabinta celceliska goobaha xadidan ee ku saleysan deeqda deriska ee dhinac kasta ee xadka.
Shaqada goobta waxay ka koobnayd abuurista aragti dhammaan cilaaqaadka ka dhaxeeya dadka iyo dhulalka hadda jira, oo ay ku jiraan lahaanshaha rasmiga ah iyo kuwa aan rasmiga ahayn ee dhulka iyo sidoo kale sheegashooyinka hadda jira. Dadka beeralayda ah iyo beeraleyda ayaa lagu martiqaaday in ay ku wareegaan wareegyada sirqooladooda, waxayna tilmaamayaan xudduudaha xuduudahooda iyaga oo isticmaalaya antenna GPS. Daraasad ayaa diiwaangeliyey aragtida iyadoo la adeegsanayo arjiga. Sawirada dayax-gacmeedka ee aagga ayaa lagu soo bandhigay shaashadda qalabka GPS-ga. xog ururinta waxaa la sameeyaa hab isku dhafan: wareega kaydiyaa sida geesoolayaasha xidhan oo ay ku jiraan nooca xaq u sheegtay wixii milkiilaha sawir ama codsadaha ka iyo sidoo kale milkiilaha Aqoonsi sawir leh ama sheegtaha ayaa lagu daray. Aqoonsi hordhac ah ayaa loo isticmaalay fureka furaha. saxnaanta lama ku salaysan joomateri, laakiin halkii ay diiradda on xiriirinaya xogta da'ayeen iyo maamulka sida in la xiriirinaya dadka qaba geesoolayaashu. Maadaama muwaadiniinta looga baahan yahay inay bixiyaan caddaynta aqoonsigooda, xukuumaddu waa inay ku taallaa dhulka. Tani waxay aad muhiim ugu ahayd guusha habkan.
Ujeedo ujeedo: Iskuday?
Imtixaanka goobta lagu sameeyay Makueni County wuxuu muujiyey in ururinta xogta iyo xogta xogta lagu fulin karo si wada jir ah, ka qaybqaadasho leh, degdeg ah oo la isku hallayn karo. Laba sahamiyaal ayaa ururiyey xogta ku saabsan 40 qiyaasta lix saacadood ee jawi buuraleyda ah iyo natiijooyinka si fiican ayaa loo helay. Si kastaba ha ahaatee, Mudanayaasha sharci iyo hay'adaha u baahan tahay daryeel si aad u dalbato habka, ka qaybgalayaasha ugu heshiiyeen in ay u baahan tahay taxadar dheeraad ah si qof walba uu helo horyaalka.
Marka la helo aragtida guud ee sirqeeraha waxaa loo baahan yahay nooca saxda ah iyo milkiilaha. Sidaa darteed waxaa macquul ah ee u geliya kati iyo sahan oo aad u sax ah ka dib inta lagu guda jiro marxaladda dayactirka, oo waxaa la samayn karaa by dadka isku waxaa loo tixgeliyaa.
Waxaa lagu qiyaasay in, waqtigan, qiyaasta 20% ee kaabayaasha dhulka ee Kenya la baaray (hal qaab ama mid kale) waana la diiwaan geliyay. Qiimaha hadda ee loo qoondeeyay, qoondaynayo, kormeerayo, meelaynta iyo diiwaangelinta laba hektar oo ku yaal Kenya ayaa ah qiyaastii boqolaal doollar halkii gobalba. Marka la eego kharashka wadarta, waxaa cad in aysan jirin wax la heli karo oo la bixiyay in qiyaastii weli lagu qiyaasay in lagu daro diiwaanka 15.000.000 celcelis ahaan.
Su'aalo badan ayaa weli ah kuwo laga hadlo oo lagu dhiso mustaqbalka. Waxaa ka mid ah sida loo kaydiyo loona maamulo xogta isku dhafan. Isticmaal koontooyinka xogta cadawga ama diiwaanka? Sidoo kale, su'aasha kale waxay la xiriirtaa dayactirka xogta, hadday noqoto mid si joogta ah loogu hirgeliyo qaab digital ah ama waa inay daabacdaa macluumaadka? Kala duwanaansho ayaa laga yaabaa inay ka baxdo nuqul daabacan oo ah sawirka dayax-gacmeedka si loo kaydiyo bulshada degaanka.
Shaki la'aan way cadahay in jihadaani kor loo qaadi doono si loo dardar galiyo cabirka xuquuqda kuwa dib loo dhigay. Isku duubnaan, oo aan laqiyaasi karin; isku darkaas oo ah in tikniyoolajiyadda iyo juquraafi ahaan bulshada ay ku deeqaan. Ku celcelintu waxay hubaal tahay inay horumarin doonto hanaan ceebayn doona gaalada dhaqanka ah, iyadoo la adeegsanayo codsiyada u eg FLOSSOLA ee aaladaha moobaylka sida saxda iyo sixitaanka kala duwani u noqdaan kuwo dimuqraadi ah. Kaliya waqtiga, ansaxinta heerarka iyo is-hoosaysiinta wajiga turunturooyinka ayaa caddayn kara inaysan ahayn wax aan micno lahayn.
Waxaan soo jeedinayaa in lala socdo waxa ka dhacaya Kolombiya, oo leh duuliyeyaasha loo yaqaan 'Multipurpose Cadastre'. Halka isku darka LADM, ku habboon ujeedo, INTERLIS iyo maskax furan ay noqon karto waxyaabaha ka kooban geofumada oo leh dhadhan aysan reer Yurub aqoon, maadaama baahiyahooda la xiriira lahaanshaha dhulku ay gebi ahaanba ka duwan yihiin kuwa ka jira xaaladdeenna dalal ee wadiiqooyinka horumarka, ama sida uu taliyuhu u dhigo: hoos loo maareeyo.
Post Previous" Hore Python: luqada waa in mudnaanta geomatics
Post Next LandViewer: image dhawrid Earth falanqaynta ee waqtiga dhabta ah ka siiyaa biraawsarkaagaNext »